Mkpọmịkasị na-atụ aro Ngwa Ngwa Ngwá Ọrụ Weebụ
The SEO Spider Tool bụ ngwa ntanetị nke ntanetị na ngwa ngwa nke na-ahapụ gị ntinye aka ibe weebụ gị na ihe ndị dị na fetches, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịtụle gị na peeji nke na peeji nke SEO.Ịnwere ike ibudata usoro a maka n'efu ma ọ bụ họrọ maka atụmatụ ya kachasị elu iji nweta uru site na atụmatụ ndị dị elu.
Gịnị ka ị nwere ike ime na SEO Spider Tool?
N'adịghị ka usoro nchịkọta data ma ọ bụ nbudata ihe ndị ọzọ, SEO Spider Tool bụ mgbanwe, ngwa ngwa ma dị mfe iji, ma mee ka ị nyochaa nsonaazụ na oge. Ọ na-anakọta data, na-enye ohere ka ndị isi CEO mee mkpebi ụfọdụ. A kọwara ụfọdụ n'ime uru ndị a n'okpuru.
1. Chọta Njikọ Ndị Na-agbawa
Iji SEO Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ, ị nwere ike ịchọta njikọ ndị gbajiri agbawa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma mee ka ọ dịrị gị mfe igwu ibe gị.Usoro ihe a na-amanye saịtị n'otu ntabi anya ma hụ njikọ dịka 404. Ọzọkwa, ọ na-arụzi njikọ ndị ahụ agbajiri ma na-enyere aka ịchọpụta njehie njehie ahụ. Ya mere, SEO Spider Tool bụ ihe ntinye na ntinye na ntanetị weebụ. Ọ na-achọta URL ma mee ka ha dịrị gị mma ozugbo.
2. Nyochaa Page nke Mpempe akwụkwọ na Meta Data
Ị nwere ike nyochaa nchịkọta isiokwu na metadata n'oge usoro nsị. The SEO Spider Tool na-ekpochapụ ụdị nkọwa nke meta na-egosipụta njehie, okwu efu, obere ma ọ bụ ogologo larịị ma ọ bụ duplicated ọdịnaya n'ofe gị na ebe nrụọrụ weebụ.
3. Wepụ Data na XPath
Ugbu a ị nwere ike ịnakọta data site na HTML nke ibe weebụ site na iji SEO Spider Tool. Ụzọ CSS ya na XPath na-eme ka ọrụ gị dị mfe ma dị mma karịa nbudata data ntinye na ntanetị ndị ọzọ. Ngwaọrụ a na-anakọta ozi sitere na mkpado meta, edemede, ebe ịnye ọnụahịa ma nweta gị data nke ọma na-ewe n'ime nkeji ole na ole.
4. Ịmepụta XML Sitemaps
Uru ọzọ nke iji SEO Spider Tool bụ na ọ na-eweta sitemap XML maka ndị ọrụ na-abịa na nhazi ntọala dị elu. Ị nwere ike ịgbanwe oge na mbido ọsọ nke saịtị gị ma mee ka ogo ya ka mma. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na-enye ụdị ndebiri saịtị dị iche iche iji họrọ.
5. Jikọọ na Akaụntụ Akaụntụ Google gị
Ị nwere ike ijikọ ma ọ bụ jikọta SEO Spider Tool na akaụntụ Google Analytics gị na ịchọta data bara uru, meziwanye ọnụego bounce, mkparịta ụka, na nnọkọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị.Ozugbo e mepụtara data ahụ, ngwá ọrụ a ka e bipụtara ya ma nyere gị aka ịmepụta ego na Intanet.
6. Nyochaa ihe mgbapụta na ntụziaka
Ugbu a, ọ dị mfe onye ọ bụla na-ele URL ndị a na-egbochi ndị robots. txt, ntụziaka nduzi X-Robots na steeti ígwè, ekele maka SEO Ngwunye Ngwadogwu maka ime ka o kwe omume. Ọ na-edozi redirect URLs na-akpaghị aka ma nweta ihe ị chọrọ ozugbo.
7. Chọpụta Ihe Odide Duplicate
I nwere ike ịchọpụta ibe weebụ ibe abụọ na ịntanetị iji SEO Ngwá Ọrụ Ngwá Ngwá Ọrụ. A na-edozi ọdịnaya a na-edegharị na ya ozugbo. The SEO Spider Tool checks gị utu aha, ọdịnaya na nkọwa maka àgwà, jide n'aka na ọ dịghị nke ibe weebụ ị na-edegharị na ụgbụ.
8. Nyocha nke onye ọkaikere
Ọ bụrụ na ịchọrọ inyocha saịtị onye na-asọ asọ gị ma chọọ ịghọta ụdị data ọ kpochapụrụ, ị ga - anwale SEO Spider Tool. Nke a bụ naanị scraping web na usoro data nke na-enye gị ohere iji tụnyere ogo gị na ndị asọmpi ma nweta gị ozi bara uru ozugbo Source .